चित्र बनाउने सजिलो तरिका
Aakar December 25, 2016
चित्र बनाउन भनेपछि, सबैलाई गाह्रो लाग्छ । हुन पनि हो, चित्र कोर्नलाई गाह्रो नै छ, सबैले गर्न सक्दैनन् । म केही पहिलेसम्म स्केच कोर्थेँ, तर अहिले तिनै स्केच कोर्न पनि म नसक्ने भएको छु, अत: चित्र कोर्न निरन्तर अभ्यास जरुरी छ भन्ने लाग्छ । आज यहाँ यस्तो 'टेक्निक' को चर्चा गरिएको 'टेड' भिडियो राख्दैछु, यो भिडियो हेरिसकेपछि जस्तोसुकै व्यक्तिले पनि चित्र कोर्न सक्नेछन् । चित्र कोर्ने भन्ने बित्तिकै, एकदम 'पर्फेक्ट', जेसुकै, जुनसुकै कुराको पनि चित्र बनाउन सकिन्छ भनेको चाँहि होइन, त्यसको लागि त निरन्तर अभ्यास नै आवश्यक पर्छ । तर यति चैँ भन्न सकिन्छ कि, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले 'अल्बर्ट आइन्सटाइन'को स्केच चैँ सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ । वाँयाबाट दाँया क्रमैसँग । कागज र कलम तयारी अवस्थामा राखेर, चित्र बनाउन सिकाउने तलको टेड टकको भिडियो हेरौँ । टेड टक'को यो भिडियोमा ग्राम स्‌ ले भनेजस्तै सजिलै चित्र कोर्न सकिन्छ । एकपटक अवश्य बनाउनुहोस् ।
भाइबरमा हाम्रो पात्रोको च्याटबोट
Aakar November 11, 2016
'हाम्रो पात्रो' भाइबरको पब्लिक एकाउण्टमा उपलब्ध भएसँगै, हाम्रोपात्रोले भाइबरमा भएका ब्रान्ड तथा सेलिब्रेटी लगायतका पब्लिक एकाउण्टहरुलाई लक्षित गरेर 'हाम्रो च्याटबोट' नामक 'च्याटबोट' सार्वजनिक गरेको छ । यसका साथै हाम्रोपात्रो एपमा उपलब्ध लगभग सबै सेवाहरु अब हाम्रो च्याटबोट मार्फत, 'हाम्रो पात्रो'को भाइबर एकाउण्टमा उपलब्ध छ । के हो हाम्रो च्याटबोट? कुनै पनि ब्राण्ड तथा सेलिब्रेटिहरुले भार्इबरमा भएका आफ्ना फलोअरहरूसम्म सहज रूपमा पुग्न तथा दोहोरो सम्वाद गर्नका लागि हाम्रो पात्रोले बनाएको च्याटबोट नै ' हाम्रो च्याटबोट ' हो । 'हाम्रो च्याटबोट'को प्रयोगबाट ब्रान्ड तथा सेलिब्रेटिहरुले तत्काल कुनै जानकारीलाई नोटिफिकेशनको रुपमा भाइबरमा पठाउन, च्याट गर्न, भोटिङ वा सर्वेक्षण गर्न, समाचार सम्प्रेषण तथा युट्युब भिडियो प्रशारण गर्न सक्छन् । आफ्नो ब्राण्ड अथवा उत्पादनकालागि आफ्नै ChatBot बनाउन अथवा यसबारे थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने 'Hamro ChatBot' को आधिकारीक वेबसाइट chatbot.hamropatro.com भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ । भाइबरमा हाम्रो पात
नेपाल टेलिकमले ल्यायो नि:शुल्क अनलाइन कक्षा
Aakar November 10, 2016
मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम ले, आएरल्याण्डको स एकेडेमी (Shaw Academy) सँगको सहकार्यमा अनलाईन एजुकेशन सेवा (Online Education Service) सेवा सुरु गरेको छ । आफूलाई पढ्न मन लागेको विषयहरु अब घरै बसेर अनलाइन, त्यो पनि नि:शुल्क पढ्न पाइने भएको छ। नेपाल टेलिकमको फेसबुक पोष्ट अनुसार, तीन महिनाको परिक्षणको रुपमा रहेको यो सेवा हाललाई नेपाल टेलिमकका ग्राहकहरुको लागि नि:शुल्क उपलब्ध गराईएकोछ । नेपाल टेलिमकका प्रयोगकर्ताहरुले स एकेडेमीमा 'रजिष्ट्रर' गरि, आफ्नो रुची अनुसारको कोर्समा नि:शुल्क भर्ना हुन सक्नेछन् । स-एकेडमीमा डिजिटल मार्केटिङ, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन, प्रोग्रामिङ, सोसल मिडिया मार्केटिङ, फोटोसप, अंग्रेजी भाषा आदि विभिन्न विषयहरु उपलब्ध छन् । नेपाल टेलिकमको नि:शुल्क कक्षामा भर्ना हुनको लागि shawacademy.com/nepaltelecom लिंकमा क्लिक गरेर स-एकेडमीमा जानुहोस्, र आफूलाई मन परेको विषय छानेर, रजिष्ट्रर गर्नुहोस् । टेलिकमको यो सेवा अन्तर्गत एकजनाले कतिवटा विषयहरु पढ्न सक्ने (छान्न सक्ने) भन्नेबारेमा चाँहि खुलाइएको छैन । साइटमा रजिष्ट्रर गरेपछि, कक्षा हुने अघिल
हाम्रो पात्रोमा तिहार विशेष ई-कार्ड
Aakar October 28, 2016
नेपाली ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुका आवश्यकता र चाहना बमोजिम स्मार्ट तथा जीवनउपयोगी सुविधाहरु निरन्तर थप्दै गएको हाम्रोपात्रो ले तिहारको अवसरमा नयाँ र्इ-कार्डहरु सार्वजनिक गरेको छ । हाम्रोपात्रोको मोबाइल एप्स तथा वेबसाइट मार्फत विभिन्न सात भाषामा तिहारको शुभकामना ई-कार्डहरु बनाएर आफ्ना साथीभाइ, आफन्तलाई अाफ्नो फोटोसहित अनलाइनमा सेयर गर्न सकिन्छ । ई-कार्ड कसरी बनाउने? हाम्रोपात्रो ई-कार्डमा आफ्नो फोटो राखेर शेयर गर्नको लागि हाम्रोपात्रो वेबसाइट तथा एप्समा पहिले फेसबुकबाट लगइन गर्नुपर्छ । फेसबुक मार्फत लगइन गरिसकेपछि, वेबसाइट वा एप्समा भएका मन परेको कार्ड छान्नुपर्छ । अाफूलार्इ मनपरेको शुभकामना सन्देश सहितको कार्ड छनाैट गरे पश्चात् प्रयोगकर्ताको फेसबुकमा भएको प्रोफाइल तस्बिर उक्त कार्डमा बस्नेछ र तत्कालै फेसबुकमा सेयर गर्न सकिनेछ। यमपञ्चकको विशेष पाँचदिने दैनिकीसहितको गतिविधि सुहाउँदो ईकार्डसहरु पहिलो चरणमा नेपाली, नेवाः, भोजपुरी, मैथिली, पश्चिमी थारू, तामाङ र अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध छन् । तपाई यी भाषा बाहेक अन्य कुनै भाषामा ई-कार्डहरु चाहनुहुन्छ भने 'हाम्रोपात्रो'
अनलाइन सपिङ्ग गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरु
Aakar October 05, 2016
नेपालमा ई-कमर्स साइट तथा एप्सहरुको बढोत्तरी सँगै अनलाईन सामान खरिद गर्न सकिने वेबसाइट तथा एपहरु लोकप्रिय हुँदैगएका छन्। यसकै सेरोफेरोमा, ईन्टरनेट सुरक्षाको विषयमा रिगो टेक्नोलोजी ले प्रकाशित गरेको ब्लग यहाँ पुन: प्रकाशित गरेका छौँ । आजकल नेपालमा सस्तोडिल, केमु जस्ता अनलाईन सामान खरिद गर्न सकिने वेबसाइट तथा एपहरु लोकप्रिय हुँदैगएका छन्। यस्ता साइटहरुमा धेरै किसिमका सामान एकै ठाउँमा पाइने, एउटा सामान खोज्न पसल-पसल चाहारी राख्नु नपर्ने, विभिन्न पसलका सामानको मूल्य तुलना गर्न पाइने, बार्गेनिंग गरिराख्नु नपर्ने हुँदा खरिद गर्न सजिलो हुन्छ। तर सजिलोका साथसाथै सुरक्षित खरिदका केहि कुरामा ध्यान पुर्‍याइएन भने उल्टो नोक्सानी पनि हुन सक्छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट खरिद गर्दा तपाइको कम्प्युटर, मोबाइल अथवा ट्याब्लेट सुरक्षित हुनु जरुरी छ। दशैँ, तिहार जस्ता चाडहरूमा, बढी खरिद बिक्रि हुने बेलामा अझ धेरै चनाखो हुनु जरुरी हुन्छ। यस्तो बेलामा विभिन्न किसिमका फटाहा, ठगहरु तथा इन्टरनेट अपराधीहरुको गतिबिधि अरु बेला भन्दा अलि बढी नै हुने गर्छ। निकै आकर्षक लाग्ने र अलि बढी नै छुट दिन्छौ भन्ने लोभ लाग्द